9 222 918 no isan'ireo mpifidy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Fampitam-baovao avy amin'ny CENI
Araka ny voalazan’ny andininy faha-30 ao amin’ny fehezan-dalàna mifehy ny fifidianana dia nofaranan’ny Vaomieram-pirenena Mahaleotena Misahana ny fifidianana ny Asabotsy 15 aprily lasa teo ny lisi-pifidianana 2016-2017. Raha 8673 485 no isan’ireo mpifidy voasoratra anarana tamin’ny famaranana ny lisi-pifidianana tamin’ny taona 2016, mahatratra 9 222 918 no isan’ireo olom-pirenena voasoratra ao anaty lisi-pifidianana tamin’ny famaranana tanteraka ny lisi-pifidianana tamin’ny 15 aprily farany teo, izay manome taham-piakarana 6,33%, izany hoe nahitana fitomboana avo telo heny mihoatra tamin’ny RALE (TTF : révision automatique de la liste électorale)farany.
Marihina fa ny fisoratana anarana anaty lisi-pifidianana dia nanomboka ny 1 desambra 2016 hatramin’ny 31 janoary 2017. Tao anatin’izany, 675 334 ireo mpifidy vaovao voasoratra. Ireo vokatra ireo dia noho ny ezaka izay nataon’ny CENI sy ireo rantsamangaikany ary koa ireo mpisehatra hafa amin’ny fifidianana toy ny filoham-pokontany sy ireo ratsamangaikan’ny Ministeran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, ireo haino aman-jery na nasionaly na avy amin’ny faritra samihafa . Anisany tombony tamin’izany ny fanatanterahana ny lanonana fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fanavaozana ny lisi-pifidianana izay natao tany Toliara ka nanaovana fanentanana manokana, indrindra ho an’ireo vehivavy sy ny tanora. Ny fanaraha-maso nataon’ny CENI isaky ny Vaomieram-pifidianana eny anivon’ny Distrika na CED ihany koa dia zava-dehibe sy nanampy tosika tao amin’ny fanatanterahana ity RALE 2016-2017 ity.
Tamin’ireo Distrika 119 misy eto Madagasikara, ny Distrikan’Ihosy no nahitana salan’isa ambony indrindra izay nahitana taham-piakarana 17,96%. Mpifidy miisa 100 869 no voasoratra raha 85 510 kosa izany tamin’ny taon-dasa. Ny Distrikan’Ambovombe kosa no manarakaraka azy izay nahitana taham-piakarana 16,78%. Hanolotra mari-pankasitrahana ireo Distrika izay mendrika ny CENI.
Mbola fanamby mipetraka ho an’ny CENI hatreto ny hahatratra olom-pirenena mpifidy folo tapitrisa voasoratra anarana ao anaty lisitry ny mpifidy hatramin’ny taona 2018. Araka izany, mbola maro ny ezaka horaisin’ny CENI an-tànana mba hahafahana miantoka fifidianana izay andraisan’ny rehetra anjara.
Ao anatin’ny fanatrarana ny vina izay napetrany “Fitantanana fifidianana azo antoka sy ara-demokratika” ihany, nampiantrano ny fivoriana voalohan’ ilay vaomiera fakan-kevitra izay handinika sy hanolotra tolo-kevitra hanatsarana ny didy aman-dalana mifehy ny fifidianana ny CENI androany 18 aprily. Io vaomiera io izay napetraky ny didim-panjakana laharana 2017-200 tamin’ny 28 martsa 2017.
Eclairage : Loi sur le régime général des élections et des référendums - il y a 3 mois